ज्योति मगर र आशिस राना ‘लाउरे’मा को बढि भल्गर? यस्तो भन्छ फ्यानहरु -हेर्नुस् भिडियो। - Enepalese.com
ज्योति मगर र आशिस राना ‘लाउरे’मा को बढि भल्गर? यस्तो भन्छ फ्यानहरु -हेर्नुस् भिडियो।
इनेप्लिज २०७४ चैत ४ गते १६:२८ मा प्रकाशित
अक्सर चर्चित नामहरु विबादिद नै हुन्छन्। चाहे पत्रकार होस् वा कलाकार, चाहे व्यापारी होस् वा राजनीतिज्ञ चर्चामा राजेका व्यक्तिहरुको बारेमा विवाद भै नै रहन्छ।
विभिन्न मेला महोत्सवका कार्यक्रममा आयोजकहरुले कोहि ठाउमा ज्योति मगरले अश्लिलता झल्काउछ भनि विरोध नै गर्छन त कोहि ठाउमा लाहुरेको बारेमा यस्ता खाले कुराहरु सुनिन्छ। आखिर यी दुइमा को चाहि अश्लिलता फ़ैलाने व्यक्ति हुन् त? त्यहि विवादको विषयमा आज हामीले यी दुइ चर्चित कलाकारहरुको बारेमा एउटा सामाग्री तयार पारेका छौं।
चर्चित पोख्रेली र्यापर आशिस राना ‘लाहुरे’ र लोक दोहोरि गायिका ज्योति मगरको बारेमा उनका दर्शकहरु संग ‘यी दुइ मध्ये को भल्गर छ?’ भने प्रश्न गरेका थियौं।
हेर्नुस् ज्योति मगर र लाउरेको बारेमा दर्शकहरुले दिएको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै।